MR MRT: မြတ်သော အမွေ
မိဘဆီက အမွေရတဲ့သူဟာ ချမ်းသာတယ်။ ဒါကို လူတိုင်း လွယ်လွယ်သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီချမ်းသာက မမြတ်သေးဘူး။ ပိုမြတ်တဲ့အမွေ ရှိသေးတယ်။ မိဘကြောင့်၊ ပစ္စည်းအမွေရလို့ ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ အမြင့်ဆုံးတန်းဖိုး မဟုတ်သေးဘူး။ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ချမ်းသာကို မိဘတွေက လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ ဆွေမျိုးတွေကလည်း လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ ချမ်းသာကို ကောင်းမြတ်တဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကပဲ ပေးနိုင်တာ။
န တံ မာတာ ပိတာ ကယိရာ၊ အညေ ဝါပိစ ဉာတကာ။
အလှူ့ဒါယကာ ဦးကျော်ဝင်းတို့ အလှူ့ဒါယိကာမ ဒေါ်သန်းလှိုင်တို့က သားရတနာ မောင်ဝဏ္ဏထွန်းကို သာသနာ့အမွေ ပေးဖို့ဆိုပြီး ရှင်ပြုပေးကြတယ်။ ရှင်ပြုပေးရုံ သင်္ကန်းဝတ်ပေးရုံနဲ့ မြတ်သောအမွေ ပေးလိုက်နိုင်ပြီ၊ သားရတနာလေး ချမ်းသာပြီလို့ မထင်လိုက်နဲ့။ သူတော်ကောင်းစိတ် ပေးနိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ အမွေတော် သင်္ကန်းရဲ့ အစွမ်းကြောင့် ကိုရင်လေးကို ရိုသေလေးစားကြရတယ်ဆိုတာ အပေါ်ယံပဲ။ သင်္ကန်းကြောင့်။ မြင့်မြတ်တဲ့ သင်္ကန်းကြောင့် ရှင်ရဟန်း အစစ်အမှန် မဟုတ်တဲ့သူကိုတောင် အရိုအသေ ပေးရတာပဲ။ နှုတ်ကြမ်းလျှာကြမ်း ကိုယ်ကြမ်းလက်ကြမ်း စိတ်ကြမ်း၊ အကြမ်းစားကြီးတွေကိုတောင်မှ . . . သင်္ကန်းဝတ်ထားရင် ရိုသေကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် အပေါ်ယံပဲ။ မြတ်မြတ်နိုးနိုး တန်ဖိုးထားရတဲ့ စိတ်ဓာတ်က ပိုအရေးကြီးတယ်။
ဆိုပါစို့ ကူညီတတ်တဲ့စိတ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေသူကို သနားတတ်တဲ့စိတ်။ အဆင်ပြေတဲ့သူကို တွေ့ရရင် ဝမ်းသာတဲ့စိတ်။ အကူအညီလိုလို့ ကူညီပြီဆိုရင် လူတိုင်းကို ကူညီနိုင်တဲ့စိတ်၊ သနားစရာ တွေ့ပြီဆိုရင် လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး သနားတတ်တဲ့စိတ်၊ ကြီးပွားချမ်းသာပြီဆိုရင် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် . . . ချမ်းသာသူတိုင်းအတွက် ဝမ်းသာနိုင်တဲ့စိတ်။ စာနာတတ်တဲ့စိတ်၊ လေးစားတတ်တဲ့စိတ်၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့စိတ်၊ ပွင့်လင်းတဲ့စိတ်၊ ခိုင်မာတဲ့စိတ်၊ မျှတတဲ့စိတ် အစရှိတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ် မွေးမြူတတ်အောင် ဆုံးမပေးနိုင်မှ မြတ်သောအမွေ ပေးရာရောက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုစိတ်က စစ်မှန်တဲ့ ချမ်းသာကို ပေးနိုင်တာပါ။ မြတ်သောအမွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ashin Acara. at 9:46 AM